Gịnị Bụ Nzube Chineke Maka Ụwa? - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
ISI NKE ATỌ
14 Jehova Chineke họọrọ Jizọs Kraịst ịbụ Onye Ọchịchị nke Alaeze, ma ọ bụ ọchịchị, eluigwe Ya. Mgbe dị anya gara aga, Bible buru amụma, sị: “A mụworo anyị otu nwa, otu nwa nwoke ka e nyeworo anyị; ịbụ onyeisi ga-adịkwasịkwa n’ubu ya: a ga-akpọkwa aha ya…Onyeisi Udo. Ọ dịghị ọgwụgwụ ọ bụla ịba ụba nke ịbụ onyeisi Ya na udo Ya ga-agwụ.” (Aịsaịa 9:6, 7) Banyere ọchịchị a, Jizọs kụziiri ụmụazụ ya ikpe ekpere, sị: “Ka alaeze gị bịa. Ka uche gị meekwa n’ụwa, dị ka ọ na-eme n’eluigwe.” (Matiu 6:10) Dị ka anyị ga-ahụ n’akwụkwọ a, n’oge na-adịghị anya Alaeze Chineke ga-ewepụ ọchịchị nile nke ụwa a, a ga-ejikwa ya dochie ha nile. (Daniel 2:44) Mgbe ahụ, Alaeze Chineke ga-eweta paradaịs n’elu ala.
17Mmebi iwu, agha, ime mpụ, na ime ihe ike agaghịzi adị. “Onye na-emebi iwu agaghị adịkwa…Ma ndị dị umeala n’obi ga-enweta ala.” (Abụ Ọma 37:10, 11) Udo ga-adị n’ihi na ‘Chineke ga-eme ka agha nile kwụsị ruo nsọtụ ụwa.’ (Abụ Ọma 46:9; Aịsaịa 2:4) Mgbe ahụ ‘onye ezi omume ga-ama akwụkwọ dị ka osisi ndụ; ọtụtụ udo ga-adịkwa ruo mgbe ọnwa na-agaghị adị’—nke ahụ pụtakwara ruo mgbe ebighị ebi!—Abụ Ọma 72:7.
18Ndị na-efe Jehova, ga-anọ ná ntụkwasị obi. Ruo ogologo oge ndị Izrel nke oge Bible rubeere Chineke isi, ha nọrọ ná nchebe. (Levitikọs 25:18, 19) Lee ka ọ ga-esi magbuo onwe ya ịnọ ná nchebe otú ahụ na Paradaịs!—Aịsaịa 32:18; Maịka 4:4.
19A gaghị enwe ụkọ nri. Ọbụ abụ ahụ bụrụ, sị: “Ka ọtụtụ ọka dị n’ala n’elu ugwu nile.” (Abụ Ọma 72:16) Jehova Chineke ga-agọzi ndị ya na-eme ezi omume, ‘ala ga-emekwa ihe omume ya.’—Abụ Ọma 67:6.
20Ụwa nile ga-aghọ paradaịs. A ga-ewu ebe obibi ndị ọhụrụ ma nwee gburugburu ebe ndị mara mma n’ala nke ụmụ mmadụ na-eme mmehie mebiri na mbụ. (Aịsaịa 65:21-24; Mkpughe 11:18) Ka oge na-aga, akụkụ ụwa ndị e budaworo n’okpuru ga na-agbasa ruo mgbe ụwa nile ghọrọ ebe mara mma, nke na-emepụtakwa ihe dị ka ogige Iden. Chineke agaghị ahapụ ma ọlị ‘ịsaghe aka Ya na iwere ihe dị ihe ọ bụla dị ndụ ụtọ mee ka afọ ju ya.’—Abụ Ọma 145:16.
21Udo ga-adị n’etiti mmadụ na anụmanụ. Anụ ọhịa na anụ ụlọ ga-atakọ nri. Ọbụna obere nwatakịrị agaghị atụ anụmanụ ndị dị ize ndụ ugbu a ụjọ.—Aịsaịa 11:6-9; 65:25.
22Ọrịa agaghịzi adị. Dị ka Onye Ọchịchị nke Alaeze eluigwe nke Chineke, Jizọs ga-agwọ ọrịa n’ọ̀tụ̀tụ̀ dị ukwuu karịa otú ọ gwọrọ mgbe ọ nọ n’ụwa. (Matiu 9:35; Mak 1:40-42; Jọn 5:5-9) Mgbe ahụ “onye obibi ya agaghị asị, Ana m arịa ọrịa.”—Aịsaịa 33:24; 35:5, 6.
23A ga-eme ka ndị a hụrụ n’anya nwụrụ anwụ dịghachi ndụ ma nwee atụmanya nke anwụghị anwụ ma ọlị. A ga-eme ka ndị nile nọ n’ụra ọnwụ, bụ́ ndị nọ ná ncheta Chineke, dịghachi ndụ. N’eziokwu, “a gaje inwe mbilite n’ọnwụ nke ma ndị ezi omume ma ndị ajọ omume.”—Ọrụ 24:15; Jọn 5:28, 29.
20. N’ihi gịnị ka anyị ga-eji nwee obi ike na ụwa nile ga-aghọparadaịs?